Ogaden News Agency (ONA) – Go’aanadii ka soo baxay shirkii la’isugu keenay ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Koonfur Afrika
Go’aanadii ka soo baxay shirkii la’isugu keenay ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Koonfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ May 30, 2011
Shir aad u xamaasad kulul ayaa dhex maray ganacsata Somalida iyo kuwa Koonfur Afrika. Shirka oo lagu tilmaamay inuu ahaa midkii ugu xamaasad kulaallaa abid ayaa waxaa wehliyay ganacsatada laamaha dawlad goboleedka Eastern cape ayaa ka furmay shalay oy taariikhdu ahayd 29kii May 2011 magaalada Mether will oo dhibaato xoogaleh loogu gaystay ganacsatada Somaliyeed maalmihii la soo dhaafay. Shirka waxaa kasoo qayb galay dhamaan laamaha dawlda hoose iyo haya’do badan oo kamadax banaan dawlada sida haya’da xuquuqul in saanka u dooda.
Shirkan ayaa furidii kadib isubadalay in ganacsatada Soomalida loogu awood sheegto iyadoo madaxa ganacsatada gobolka Eastern cape uu si cad ugu nuux-nuuxsaday in uuna booliska wadanku awood u ahayn uu ku baadiyo Smalida waxaana ka mid ahaa hadaladiisa; ” .. Soomalidu waxay ku qasban tahay inay aqbalaan waxaan u yeedhino anagoo ah ganacsatada wadaniga.” Ganacsatadii Soomalida ayaa waxay shirkaa kala kulantay mooraal jab aad u baaxad balaadhan kadib markii loogu hanjabay in dukaamadooda kala badh albaabada loo labayo iyadoo aan dawlada lala socodsiinin.
Hadda kahorba Soomalidu ma ayna ahayn kuwo nabad ku hurda oo waxaa mar walba lala dul taagnaa qori, waxaana markasta dhici jiray in si fudud loolaayo loona dhaco ka dibna aanay laba ka wadahadal. Laakiin waxay arintu hadda taagan tahay kadar oo dibi dhal oo waxaa bilawday boob aad moodo inuu shar ciyaysan yahay oo ay dawlada iyo boolis kuba si cad ula socdaan. Dukaamada cagta lamariyay wiigan aan ku jiro lana diidan yahay in lagu noqdo ayaa kor u dhaafaya 93 dukaan. Dukamada cadadkaa leh ee la boobay ayuu booliiska ku kutilmaamay in aan Somalida laga raali galin karin sababtoo ah buu yidhi waxay si cad ula waregeen ganacsigii dadka wadaniga ah.
Caqabadan soo foodsaartay Soomaalida ayaa waxay u muuqataa tu saamayn wayn ku yeelan doonta nolosha dadka Soomalida ah ee wadankan ku nool oo dhamaan noloshoodu ku tiirsantahay dukaamada laga furo tuulooyinka dadka madawga ahi ku nool yihiin.
Waxaa gobta ka hadalay laaamaha kala duwan ee dawlada shirka oo uu shir gudomineyey council Bafana nin ladhaho oo soomalida u shegay in aanay meesha ka hadal sababtoo ah dadka oo aad u cadhaysan daraadeed ayuu yidhi Bafana ka hadlay arimo badan iyo hadal ay dawaladu isku dayeyso inay ku dajiso dadka meesha yimid.
Waxaa jiray shir balaadhan oo Somalida iyo dawaladu wada yeesheen 15.5.2011
oo lagaga hadlayey in la joojiyo dukaamada ama gancasatada cusub ee furanaysa dukaamada ama gadanaaya qorshahaasoo ay wateen dawlada iyo ganacasatada wadanka hasa ahaatee la isku afgaran wayey Soomalida oo aan raali ka noqonin daraaded. Arintaa oo aan dhincna u dhicin ayaa waxaa la gadhay doorashadi dawladaha hoose oo lagu kala mashqulay.
Waxaad moodaa inay cadho cadho gaadhay lasoo bexeen ganacasatada wadankan xisbiyada siyaasadda ayaa arintan saameyn ku yeelatay. Xisbiga ANC ee talada dalka haya ayaa doorshadi dawalda hoose ee 18.5.2011 waayey cod dhan 40% oo horay uu u heestay. Si kastaba ha ahatee shirka ayaa lagu heshiyey qodobadan soo socoda;
1- Wixii ka dambeeyay 15.4.2010 ee ganacasi ah in laxidho dhamaan albaabadana loolaabo
2- In ladhiso guddi isku dhafa ah oo masuul ka noqota hawalha gancasiga oo ay kamid tahy kormeerida iyo xoojinta saaxibtinmo iyo is dhexgalka dhaqale iyo in alaabta jumlada ah hal meel laga soo gato.
3- In loo ololeeyo barmaamuju lagu kormeerayo ganacasi kasta oo ku yaala Nasel Madel dhulka lagu magacaabo, waa Port Eliza pith iyo nawaaxigeeda.
4- In laga wada shaqeeyo in dukaamada waaween loo sameeyo sicir ama isku qiimo lagaga wada gado kuwaasoo ah kuwa laga adeegto ay leeyahiin cadaanka iyo hindida wadanka u dhashay.
5- In la mideeyo sixirka ama qiimaha ay dukaamadu gadayaan
6- In la sameeyo barmaamuj qiimeyn ah oo lagu daba galayo habsami u socodaka arimahan lagu heshiyeye iyadoo gudoomiyaasha xaafadaha lagu war galiyey inay bulshada si joogta ah ula socodsiiyaan hdaba meesha ay waxa marayaan.
Gudida waxaa lasoo dhisayaa maalmaha soo socoda, waxaa gudida kaqeyb gali doona councilor, wasaarada hormarinta dhaqalaha, dalxiiska iyo dhaqaalaha, gudiyada cpf gudiyada booliska iyo xidhiidhka dadweenaha iyo Gudiyada taliyaasha saldhig yada booliska.
Waxaada moodaa in qodobadan iyo dadka jawigiisu is laheen. Soomalida waxay u arkaysay in loo diiday hadlka lana juujubayo, meesha ay ganncasatda reer Koonfur Afrika u arkayeen in wali dadka aan wadanka u dhalan ay dawladu difaaceeso.
Hadii go’aanadan ay meel maraan waxaa khadka ka bixi doona in kabadan 3000 oo ganacsiyo ah gobolkan Eastern Cape siday kaga dhawaajinayeen dadka u ololeeya in xadka laga saaro wadankan ayaa sheegayey in wadanka laga wada hir galinaayo sharcigan lana sii adkeen doono sida ay sheegtay laanta socodaalka ee wadankan. Waxaa soo gala wadankan 400 oo qof oo ka kala imaanaya Ogadeniya oo dad badan ay ka soo qaxayaan iyo Soomaliya oo ilaa 1992 ay dad xisaab la’aan ah ay ka soo qulqulayaan.
Xisbiyada siyaasada ayaad mooda inuu kor u kacayo hadba xisbigii cadaadiya waxay ugu yeedhaan soo galootiga.
Majiro cid ka wadashay dhalinyarda sida joogtada ah loogu layo wadanka iyadoo ay jiraan xasuuq baladhan oo ka socoda wadankan. Dilka, dhaca, gubida meheradaha iyo boobku waa wax ka caadi ah dalkan Koonfur Afrika gaar ahaan xaafadaha ay dagan yihiin dadka madowga ah.
Shirka oo furmay 2dii duhurnimo ayaa laga soo baxay 7dii fiidnimo. Mar aan wax ka waydiyey dareenka dhalinyarada ayey ii shegeen in aanay ku faraxasaneyn sida reer Koonfur Afrika waa u wadaan.
Intaan ka soo baxanay shirka waxaa naloo sheegay in labo wiil la dilay taasoo Somalida ku sii beertay walwal aad u balaadhan iyo niyada jab. Labadan wiil ayaa ah reer Ogadeniya waaxana naxariisti Allaha siiyee lagu kala magcaabi jiray;
1- Cali cabdi cumar
2- Muxusin Sheekh Cusmaan
Labada wiil ayaa daganaa tuulada lagu magacaabo Injooli waxayna kala joogeen labo dukaan oo kala fog. Goobta oo aan daqiiqado kadib gaadhanya ayaan ugu taganay 2wiil oo meyd ah.
Waxaad moodaa inay soomalida rere koonfur afrika xaaladu ku adgtahay
Wixii ka soo kordha iyo gudiyada lamagacaabo kala soco wakaalada wararka ee ONA
Omar jigjiga ONA/ KOONFUR AFRIkA